ကလေးကို မပျိုးထောင်ခင်မှာ သားသမီးကို သိတဲ့ မိဘဖြစ်အောင် အရင်ကြိုးစားပါဉီး
Home Lotaya ကလေးကို မပျိုးထောင်ခင်မှာ သားသမီးကို သိတဲ့ မိဘဖြစ်အောင် အရင်ကြိုးစားပါဉီး
ကျွန်မတို့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေက အတ္တကိုယ်စီနဲ့ ရှင်သန်နေကြပါတယ်။ အလုပ်ရှင်မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အတ္တလေးနှင့် အလုပ်သမားမှာလည်း ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မာနသေးသေးလေးတွေနဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေမှာလည်း ”ငါ့ကိုတောင် ဂရုမစိုက်တာ ဘာလို့ သူ့ကို အဖက်လုပ်ရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အလျှော့မပေးခြင်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမှာမဆို ဒီလိုခလုတ်ကလေးတွေက ရှိစမြဲဆိုပေမယ့် မိဘနှင့် သားသမီးဆက်ဆံရေးမှာ လုံးဝမရှိသင့်တဲ့ ခလုတ်ကန်သင်းမျိုးပါပဲ။
ကျွန်မတို့အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်း ပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မလွယ်ကူခဲ့ဖူးသလို ဘယ်တော့မှလည်း လွယ်ကူလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဖိုးတန်သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ပျိုးထောင်ရတဲ့အခါ နေ့စဉ်ရေလောင်းပေးဖို့ လိုအပ်သလို မြေဩဇာပုံမှန်ကျွေးပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအဖိုးတန်လေလေ ပိုပြီးဂရုစိုက်ရလေလေပါပဲ။ ဒါဟာ သက်မဲ့အပင်လေးတစ်ပင်ပါ။ သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်ရဖို့ ဒီ့ထက်ပိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ အစဉ်အလာကလည်း မိဘက အမြဲမှန်ပါတယ်။ Sanam Teri Kasam ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ဇာတ်လမ်းထဲက ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးတစ်ခုက ” မိဘတွေက သူတို့သားသမီးတွေအတွက် ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျိန်စာတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားရှင်ကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်”တဲ့။ မိဘတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် မှန်နေတဲ့လော့ဂျစ်မှာ အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်တာကလည်း မေမေတို့အတွက် အရှုံးမရှိပါဘူး။
ကလေးငယ်တွေ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကတည်းက ကလေးနဲ့ အချိန်ကုန်ပေးပါ။ စကားပြောပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ ဝါသနာတွေကို တူးဖော်ပေးပါ။ အမူအကျင့်ကောင်းတွေ သင်ပေးပါ။ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာမို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ အချိန်ယူစဉ်းစားပါ။ ကလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံးတာဝန်ကျေပေးပါ။ ကလေးကို ကောင်းမွန်တဲ့ပျိုးထောင်မှုမရှိဘဲ အရွယ်တစ်ခုရောက်လာမှ မိဘဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုရင် တရားသလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကလေးငယ်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါ။ အရွယ်ရောက်လာပြီး သားသမီးတစ်ယောက်ကို သံသယတွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံးရန်လုပ်ပြီး ပုံသွင်းနေမယ့်အစား ကလေးငယ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးငယ်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။ ကလေးကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကျေးဇူးသိတတ်သူ၊ ကတိတည်တတ်သူ၊ လိမ်မပြောတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပါ။ ကိုယ့်ရဲကလေးဟာ ဘယ်လိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားမှလည်း ယုံကြည်နိုင်မှာပါ။ လူတွေက တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် နားမလည်နိုင်တာတွေ၊ မယုံကြည်နိုင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးကို မယုံကြည်စိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်တိုင်က ပျိုးထောင်လာတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ သွေးသားလေ။
ကလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူတာကြောင့် ပြုစုပျိုးထောင်နည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုလည်း လိုက်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးလေးက ဘာတွေကြိုက်တတ်လဲ၊ ဘာတွေကို မကြိုက်ဘူးလဲ? ဘယ်လိုအရာတွေကို မြင်ရင် မျက်လုံးလေးက လက်ခနဲဖြစ်သွားတတ်သလဲ? ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြောက်တတ်သလဲ?? ဆိုတာတွေက မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ တကယ်ကို သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေပါ။
လူတိုင်းက မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ နေဝင်ချိန်တွေကို အေးအေးချမ်းချမ်းကုန်ဆုံးချင်တယ်ဆိုရင် သားသမီးတွေငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ချိုမြိန်သောပျိုးထောင်နည်းတွေနဲ့ ပျိုးထောင်ပါ။ ပျိုးထောင်နိုင်ဖို့က ကလေးကို ကောင်းကောင်းသိမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို သိအောင်လည်း ကြိုးစားပါ။ ပျိုးထောင်နည်းတွေကို ဒီ Chit_May_May ပေ့ချ်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ အားလုံးကို လိုက်လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
Previous articleအကျိုးရှိပြီး ထိရောက်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next articleကလေးတွေကို အိမ်ရာဝင်ချိန် ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင် သင်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၁၁)မျိုး